Chii chinonzi yemahara software? Richard Stallman pachake anozvitsanangurira kwauri | Linux Vakapindwa muropa
Richard Stallman, iye musiki wesangano re Free Software, anozvitsanangura muvhidhiyo iyi Chii chiri yemahara software, uye inoita ongororo yakakosha yekuti nei zvikoro zvingoshandisa chete Mahara software.
Yemahara Software inoreva, software inoremekedza rusununguko rwemushandisi uye kubatana kwevanhu munharaunda yavo […]
[…] Kuti chirongwa chiri Mahara Software zvinoreva kuti mushandisi ane mana akakosha rusununguko:
0. Zero rusununguko rusununguko rwekumhanyisa chirongwa zvisinei iwe chaunoda.
1.Rusununguko imwe rusununguko rwekufunda sosi kodhi yechirongwa uye nekuchichinja kuti chirongwa chiite zvaunoda.
2. Rusununguko rwechipiri rusununguko rwekubatsira vamwe kureva, rusununguko rwekugadzira nekuparadzira makopi chaiwo echirongwa pese paunoda.
3. Rusununguko rwechitatu rusununguko rwekupa kunharaunda yako, ndiko kuti, rusununguko rwekugadzira nekuparadzira makopi eshanduro dzako dzakagadziridzwa dzechirongwa.
Nerusununguko rwune urwu, chirongwa ichi cheMahara Software nekuti masisitimu enharaunda ekushandisa nekuparadzira inzira yetsika, kuremekedza rusununguko rweumwe neumwe uye nekuremekedza nharaunda yevashandisi.
Uye ese Software anofanira kusununguka nekuti munhu wese anokodzera rusununguko. […]
Zvinoratidza izvozvo Richard Stallman iye anofunga uye anorarama semusayendisiti wemakomputa kubva panguva yaanomuka kudzimara aenda kunorara ... uye humbowo hweizvi ndechekuti anotanga kuverenga rusununguko ne zero :-)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Chii chinonzi yemahara software? Richard Stallman pachake anozvitsanangurira kwauri
ndimu inovava akadaro
Nei uchitanga kunyora rusununguko rwune kubva pakutanga?
Pindura kumunyu wakasviba